06/01/13 ~ Myanmar Forward
၀ါဆိုမိုးဦးရဲ့ ဓါတ်ပုံ Album
Posted by drmyochit Saturday, June 01, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
မီးရောင်အောက်က အကြွေပန်းလေးများ ဘ၀အကြောင်း
Posted by drmyochit Saturday, June 01, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
သူမရဲ့လုံး ၀န်းတဲ့ တင်ပါး အိအိတွေကို ဝှေ့ရမ်းလှုပ်ခါပြစ်လိုက်တယ်
ကဲ . . . ဘာထူးလို့လဲ ကျွန်မမောင်လေး နောက်နှစ်ကျောင်းဆက်ထားနိုင်ဖို့
သိုးစော်နံနေတဲ့ အဲ့ဒီအဆီတစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးတွေကို ကျွန်မအခုနိုပ်ပေးနေရတယ်
ကျွန်မအမေမြန်မြန်နေပြန်ကောင်းလာအောင်လို့ ကျွန်မစကပ်တွေ တဖြည်းဖြည်းတိုတိုလာရတယ်
တစ်လတစ်လ အလျှင်မီအောင် အိမ်စရိတ်ထောက်ဖို့အရေး ရှင့်ကိုအကြင်နာတွေပေးပေးနေရတယ်
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် . . . ဟုတ်တယ်ဟုတ် . . ကျွန်မတို့အထည်တွေ မချုပ်ကြတော့ဘူး
ခွန်အားနဲ့အတက်ပညာတွေ ဈေးပေါနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဈေးကောင်းရတာပဲ
ကျွန်မနာမည်လား . . အမေပေးခဲ့တာတောင်မေ့တေ့တေ့ရယ်
ကျွန်မနာမည် ကြယ်စင် . ကျွန်မနာမည် နံနက်ခင်း . ကျွန်မနာမည် တာရာ . ကျွန်မနာမည် အလင်္ကာ
ကျွန်မတို့ဟာ လျှပ်စီးကြောင်းနဲ့ ပတ်ကြားအက်နေတဲ့ မိုးတိမ်တွေပဲ
ကွက်ကျားမိုးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်မှာ ဘွားကနဲ ပေါက်ရောက်လာတဲ့ မိုးဦးမှိုပွင့်တွေပဲ
စီးဆင်းနေတဲ့ငွေကြေး စာရင်ဇယားတွေဘေးမှာ ကွေးညွှတ်နေတဲ့ မြစ်ကျိုးအင်းတွေပဲ
လျှော်ဖွတ်ပြီး မီးပူတိုက်ထားတဲ့ ဘေထုတ်ထည်ကိုကြည့်သလို ရှင်ကျွန်မကိုမကြည့်ပါနဲ့
ရှင့်စကားနဲ့ ကျွန်မကိုအဖျားခတ်လိုက်ပုံက ကျွန်မတို့ကပဲ
ကျွန်မတို့ကပဲ သူများမိသားစုတွေကို ကူးတို့ဆိပ်မှာ မှို့အိတ်ဖွင့်နေသလိုလို
ကျွန်မတို့ကပဲ ရှင်တို့ရဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့စာမျက်နှာတွေကို ပလုပ်တုတ်ခေါက်နေသလိုလို
အချစ်တဲ့ . . . ရှင်လေချဉ်တက်လိုက်သလား ဘီယာစော်နံလိုက်တာ
ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မတို့အလုပ်က သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး
ဒါပေမယ့် . . ဒါဟာ အမှောင်နဲ့ ချိန်တွယ်ရတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပါရှင်
"အမ္ဗပါလီ" အစ "မော်နီကာဗယ်လူချီ" အဆုံး ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ
ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့စက်ရုံမှာ အချိန်ပိုဆင်းရတဲ့ ခွေးသွားစိတ် တွေပါပဲ
တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာရတာလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး
အိုစမာဘင်လာဒင် သေဆုံးသွားတာလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ တခြားစီ
ဒေါ်လာဈေး ကမောက်ကမ ဖြစ်အောင်ကျွန်မတို့တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး
ကျွန်မတို့ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် ကဗျာစပ်မနေပါနဲ့ ရှင်ရယ်
ဘောစိနော် ဘော်ကယ်ကြေးလေး တစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ ရှင်ကျွန်မကို ဒီအတိုင်းပြစ်မထားခဲ့နဲ့ဦး
အိုခေ . . . ဒီငယ်ကျွမ်းဆွေ တစ်ပုဒ်ဆိုပြီးသွားရင် တစ်ဆက်ရှင် စာအချိန်စေ့ပြီ
နောက်တစ်ခါလည်း ကျွန်မတို့ဆီကို ဒီလို ဆင်တွေတအုပ်ကြီးနဲ့ လာရောက်အားပေးနိုင်ပါစေ
[ဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်ရသော မြန်မာ မိန်းခလေးများဘဝကို စာနာနားလည်နိုင်ကြပါစေ]
ရခိုင်ပြည်နယ် NLD ပါတီများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဗဟို ကို ဆန့်ကျင်ပြီ
Posted by drmyochit Saturday, June 01, 2013, under သတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ပေါက်တော၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ ရသေ့တောင်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ မြို့နယ်ပါတီများမှ ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ ကန့်ကွက်မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး အစိုးရနှင့် သဘေားထား ထပ်တူ ထပ်မျှရှိကြောင်း၊ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သဘောထား မကိုက်ညီကြောင်း ရန်ကုန် NLD ဗဟိုသို့ ကြေညာချက် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
တမိသားစု ကလေး ၂ ဦးယူ ပေါ်လစီနဲ့ ဆေးပညာရှုထောင့်အမြင်
Posted by drmyochit Saturday, June 01, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
ဗူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသရှိ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ အပေါ် မိသားစုတစ်စု ကလေးနှစ်ယောက်သာ ယူခွင့်ရှိတဲ့ ဒေသန္တရ အမိန့်ဟာ ခွဲခြား ဆက်ဆံရာ ရောက်တယ် ဆိုပြီး လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ အပါအ၀င် အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂကပါ ပြစ်တင်ဝေဖန်လာကြပါတယ်။ ကနေဒါ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ဘာသာရပ်မှာ အထူးပြု လေ့လာခဲ့တဲ့ ဆေးပညာရှင်တစ်ဦးကတော့ ဒါဟာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အခြေအနေအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရာ ရောက်တယ်လို့ ရှုမြင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စောဝင်း ကို ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ ဒေါ်လှလှသန်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
လူတစ်ပိုင်း၊ခွေးတစ်ပိုင်း ဖြစ်ရသည့် ဘ၀ (ဗီဒီယို)
Posted by drmyochit Saturday, June 01, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း | 1 comment
ဗုဒ္ဒဘာသာ အယူဝါဒ အရ ကံကံ၏ အကျိုးအတိုင်း ယခု လူ့ဘ၀၌ပင် လူတစ်ပိုင်း၊ ခွေးတစ်ပိုင်း ကဲ့သို့ ဘ၀ မျိုးဖြင့် လှည့်လည် တောင်းရမ်းနေသည့် ဗီဒီယို ဖြစ်ပါသည်။ သံဝေဂ ယူနိုင်ပါစေ။
ရခိုင်ပြည်နယ် NLD ပါတီများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင...
တမိသားစု ကလေး ၂ ဦးယူ ပေါ်လစီနဲ့ ဆေးပညာရှုထောင့်အမြင်...